Alaskan Klee Kai ခွေးမွေးမြူရေး - အချက်အလက်များနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး - Breeds
Klee Kai ကို Schibperke နှင့် American Eskimo တို့၏အကူအညီနှင့်အတူ Siberian နှင့် Alaskan Huskies မှဆင်းသက်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကိုသင်ခွံထဲမှာတွေ့ရကဲ့သို့တူညီသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။
၎င်းတို့သည်စပ်စု။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအရွယ်အစားအတွက်အလွန်ခိုင်မာသည်၊ Klee Kai သည်အလွန်ခွန်အားကြီးသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့် 'hyper' နည်းနည်းခွေးမဟုတ်။ သူတို့သည်လှပပြီးဂုဏ်ယူကြသည်။
Klee Kai ဟူသောဝေါဟာရကို“ ခွေးငယ်လေး” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသောအစ်စမစ်စကားမှဆင်းသက်လာသည်။ ဤခွေး ၅၀၀ ခန့်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။
Klee Kai အမျိုးသားဥယျာဉ်ကလပ်နှင့်ကယ်ဆယ်ရေး
Klee Kai အမျိုးသားဥယျာဉ်ကလပ်စံ
ဥက္ကလာဟိုးမားတွင် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်း၌မတော်တဆတိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။ Klee Kai ဖောက်လုပ်သူ Linda Spurlin သည်ခွေးကောင်လေးကို Husky နှင့်တူပြီး၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောတိုက်ခန်းအရွယ်ရှိခွေးဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အလက်စကာမှသူမ၏အစ်ကိုသည်ထိုခွေးမျိုးကိုပင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကမျိုးစုံစုံလင်အောင်လုပ်တယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်လင်ဒါသည်သူ၏အစ်ကိုကိုဝယ်ယူပြီးနောက်သူမကိုယ်တိုင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သူသည်ထိုပထမဆုံးနှစ်များကိုသူမဖန်တီးခဲ့သည့်သတ္တဝါငယ်လေးများကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်မပေးဆပ်ခဲ့ပါ။ သူမသည်ကြမ်းတမ်းသောကာလနှင့်နှစ်ပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ သူသည်ပထမဆုံးခွေးကို ၁၉၈၈ ဒီဇင်ဘာလတွင်မွေးမြူရန်ရည်ရွယ်သည်။
Klee Kai သည်ဆိုက်ဘေးရီးယား Husky ကဲ့သို့ဂရုစိုက်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ သူတို့ဟာအလွန်သန့်ရှင်းတယ် အများစုသည်စိုစွတ်သောခြေထောက်များကိုမနှစ်သက်ကြပါ။ မိမိကိုယ်ကိုနေ့စဉ်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နာရီပေါင်းများစွာကုန်လိမ့်မည်။
သူတို့၌“ ခွေးမွှေး” မရှိသကဲ့သို့“ ခွေးအသက်ရှုခြင်း” လည်းမရှိပါ။ Klee Kai အများစုသည်ရေချိုးရန်ခဲယဉ်းသည်။
Alaskan Husky နှင့်ဆိုက်ဘေးရီးယားလူမျိုးများကဲ့သို့ပင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးသွန်းလောင်းခဲ့သောတိုတောင်းသောဆံပင်များနှင့်မတူဘဲ Klee Kai သည်လည်းသူတို့၏အင်္ကျီကိုတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်ရိုက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ခွေး၏အရွယ်အစားလွအမွေးပမာဏကန့်သတ်; သို့သော်ယခုထိကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ဤအချိန်အတောအတွင်းခွေးကိုပုံမှန်သင်းဖွဲ့ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကြာကြာဆံပင်မရှိသည့်ခွေးအချို့သည်သတို့သားကိုမဝတ်ထားလျှင်၎င်းသည်တောက်ပလာနိုင်သည်။ Klee Kai အများစုသည်ခြံစည်းရိုးကဲ့သို့သောအရာများကိုပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုကိုကူညီလိမ့်မည်။
ဒီမှုတ်အင်္ကျီထိုးသည့်ကာလ မှလွဲ၍ Klee Kai သည်အလွန်လုံလောက်သည်။ လက်သည်းများကိုချုံ့ခြင်း၊ ပုံမှန်ဖြီးလိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောပုံမှန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သင့်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် bonding လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အထူးအရေးကြီးသည်။
သင်၏အိမ်ရှိ Klee Kai ဆိုသည်မှာသင်သည်မည်သည့်အခါကမျှအထီးကျန်ခြင်းမဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်ကသင်မလိုချင်ဘူး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်နာကျင်မှုကိုသက်သာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်တောင်မှသင့်ကိုသူတို့ရယ်စေတယ်။
ဒါကအရမ်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ပါ။ ခွေးအထီးတစ်ကောင်သည်သူမအနားရှိအမျိုးသမီးထံရောက်ရန်ကွင်းဆက်ချိတ်ထားသည့်ခြံစည်းရိုးကိုကြိုးမချထားခဲ့ပါ။ မိန်းမတစ်ယောက်ကခြံစည်းရိုးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကခြံစည်းရိုးအောက်မှာညှစ်နိုင်တယ်။
Siberian Husky နှင့်မတူသည်မှာ Klee Kai သည်သူစိမ်းများနှင့်မတည့်သူဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အလွန်ကောင်းသောစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များကိုလုပ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်အဘယ်အချိန်၌ရောက်နေကြောင်းနှင့်ဘာမှမပြောသည့်အခါခဲယဉ်းလိမ့်မည်။
သူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တယ်။ Klee Kai ဟာကစားစရာလိုဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်ဘူး။ သူတို့ကလေးလေးစားစားဆက်ဆံချင်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကလေးများသည်ထိုဆန္ဒကိုကျူးလွန်မိကြသောကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုမည်သို့ကုသရမည်ကိုသိသောကလေးများသာလျှင်သူတို့နှစ်သက်သောအဖော်များဖြစ်သည်။
ဤခွေးများသည်စနစ်တကျပေါင်းသင်းခြင်းမပြုလျှင်ခွေးများသည်ရန်လိုသောခွေးဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဤအချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာ Klee Kai သည်သူစိမ်းကောင်းများထားသမျှကာလပတ်လုံးထူးဆန်းသောခွေးများကိုချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသည်ကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ Klee Kai သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ထူးဆန်းသောခွေးများနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသော်လည်းမည်သည့်ကျူးကျော်မှုမျိုးကိုမဆိုပြန်ပေးလိမ့်မည်။
Klee Kai ဟာသူ့သခင်အနားမလာတဲ့အခါစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရပါတယ်။ သူတို့ဟာသူ / သူမနဲ့အတူခရီးသွားရတာလွယ်လွယ်ကူကူပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Klee Kai ၏ပုံတူသည်သူ၏သခင်နှင့်မိသားစုဝင်များအပေါ်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုကိုမဖော်ပြဘဲမပြည့်စုံပါ။
Klee Kai သည်မုဆိုးများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကြီးထွားလာခြင်းသို့မဟုတ်မှန်ကန်စွာမိတ်ဆက်ခြင်းခံရပါက Klee Kai သည်ကြောင်များနှင့်၊ ငှက်များရှိအိမ်ထောင်စုတစ်ခုတွင်နေထိုင်နိုင်သည်။ ပိုင်ရှင်အတွက်အိမ်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ငှက်များကိုမစွန့်ပစ်ရန်သို့မဟုတ်ကျား၊ မြင်းကောင်စသည်တို့နှင့်အခန်းမရှိသည့် Klee Kai မထားခြင်းကပိုင်ရှင်အတွက်အမြော်အမြင်ရှိလိမ့်မည်
သူတို့၏အမဲလိုက်ခြင်းသည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ပြီး၎င်းတို့အားထမင်းစားရန်လူသိများသည်။ ငါရှင်းလင်းသောဘောလုံးများထဲမှတစ်ခုထဲတွင် gerbil ပြေးနေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် Klee Kai အိမ်တွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းပြောနေသည်။
ခွေးကဘောလုံးကိုလှည့်ပတ်နေသည်ကိုကြားလိုက်ရသည်နှင့် Gerbil သည်ဘေးကင်းသည်ဟုတွေးမိသည်။ နောက်ထပ်သိတဲ့အရာကတော့ Sitka ဟာ gerbil ကိုစားနေသည်ဟုအော်လျက်အိမ်ထဲတွင်ပြေးလာနေသည်။ ဒါကငါတို့အိမ်၌နောက်ဆုံး gerbil ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ၏တောင်တက်သမားတစ် ဦး သည်ရပ်တည်ချက်မှဆွဲထားသောငှက်လှောင်အိမ်တစ်ခုပေါ်တွင်လည်းကျွန်ုပ်ရထားခဲ့သည်။ သူမသည်ရိုးရိုးစားပွဲပေါ်တက်ပြီးလှောင်အိမ်ထိပ်သို့ခုန်ချလိုက်သည်။
ငါကြောင်ရှိရာအိမ်တွေမှာ Klee Kai အများကြီးထားခဲ့တယ်၊ ငါမှာရေကာတာသူနာပြုသူနာပြုလေးတစ်ယောက်ရှိနေပြီ။ သို့သျောလညျးရုံယုံကြည်စိတ်ချမရနိုင်အချို့ရှိပါတယ်။ အဲဒီခွေးတွေကိုငါ့အိမ်ကမထွက်ခွာခင်ငါသိမှာပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Klee Kai သည်ပုံမှန်အငြင်းပွားမှုမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်စကားပြောသူများဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏ပိုင်ရှင်များကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်အတူနေထိုင်ရန်သတိပေးသည်။ Klee Kai ကသူတို့ကညည်းညူနေတဲ့အမိန့်ကိုနာခံရင်နောက်ဆုံးစကားလုံးကိုရချင်ကြတယ်။
Klee Kai သည် Husky ကဲ့သို့ puckish ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် Klee Kai ၏ခုံငယ်လေးကိုနံနက်စောစောတွင်ဖြစ်စေ၊ ညည်းညူညောင်ညောင်များဖြစ်စေနီးကပ်စွာအတူတကွသီချင်းဆိုခြင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ သူတို့က cue အပေါ်လျှင်အဖြစ်မြည်စတင်နှင့်ရပ်တန့်။ သူတို့ကအစစိတ်ပညာမဟုတ်ကြဘူး။
၄ င်းသည်စီစဉ်ထားသောပွဲမဟုတ်သည့်တိုင်အစာစားချိန်ကိုသူတို့သိကြသည်။ တစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းနေသည့်အချိန်ကိုအိမ်ခေါင်မိုးများ၌ကဲ့သို့အိမ်မှဖယ်ရှားခံရလျှင်ပင်သူတို့သိနိုင်သည်။
ဒီအသားကိုကြက်၊ သူတို့ဟာအဆင့်မြင့်အစားအစာလိုအပ်တယ်။ သူတို့အဘို့အစျေးပေါခွေးအစားအစာ။ နာမည်ကောင်းတံဆိပ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့လှောင်ပြောင်သရော်မှုတွေအတွက်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ဖို့သူတို့ဆီမှာလောင်စာအများကြီးလိုအပ်တယ်။
Klee Kai သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာစားသုံးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ခွေးဂေဟာများတွင်ကြီးပြင်းသောအခါ၊ သူတို့သည်ဂရုစိုက်ခံရစဉ်အကောင်းဆုံးအစာစားလေ့ရှိပြီးမိသားစုနှင့်အတူအိမ်တွင်ရှိနေစဉ်သူတို့၏အလေးချိန်၏အများစုကိုရရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင် 'potty training' ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေဖို့ခွေးတွေကိုအချိန်ဇယားအတိုင်းကျွေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ခွေးပေါက်စများကိုတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးသုံးကြိမ်အစာကျွေးသင့်သည်။ လူကြီးများကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ကျွေးနိုင်သည်။
Klee Kai ကိုပိုင်ဆိုင်သောလူအများစုသည်ခွေးနေရာထိုင်ခင်းပြီးသည်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုအစာကျွေးမည်။ သူတို့က 'chow' နှင့်လူမှုရေးစားဖြစ်လေ့ပါဘူး။ ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့သည်ခဲသောကိုယ်အလေးချိန်ကိုခဲသည်။ ဤခွေးများသည်ပဲများ၊ ပြောင်းဖူးများ၊ မက်မွန်သီးများ၊ ငှက်ပျောသီး၊
Klee Kai သည်မိသားစုခွေးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အလာစကာတွင်ကြီးပြင်းလာခြင်းကြောင့်ပြသသည့်အတိုင်းသူတို့သည်အေးခဲနေနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အိမ်ရာမှာကောက်ရိုးနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခွေးအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့လူမျိုးနဲ့အတူအပျော်ရွှင်ဆုံးပဲ။ Doggie တံခါးများကဤခွေးများအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာအခါအားလျော်စွာသူတို့ရဲ့လူတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဝင်ချင်ကြတယ်။ သူတို့ကသေးငယ်တဲ့ကလေးများနှင့်ပင်ကလေးများနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။
Klee Kai သည်ကလေးငယ်ကိုအိမ်ထဲကြည့်နေစဉ်ကလေးငိုစဉ်ကပင်မိဘကိုသွားတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ နွားတွေကိုနို့တိုက်ကျွေးတဲ့ဆည်တွေရှိတယ်။
ခြံစည်းရိုးများသည်မပျော်သော Klee Kai ကိုကိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Klee Kai အများစုသည်မိသားစုများမှပြန်လာသောအိမ်များမှခွဲထွက်ပြီးထွက်ခွာသွားကြသည်။ သူတို့ဟာမညီညွတ်မှုအပေါ်အလွန်အမင်းအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြပြီးမကြိုက်ကြဘူး။
သူတို့ကသူတို့မိသားစုနှင့်အတူနေရန်အိမ်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့ခြံထဲမှာထားရှိမည်တဲ့နေအိမ်စွန့်ခွာလိမ့်မည်။ သူတို့ကအလွယ်တကူ kennel သို့မဟုတ်သေတ္တာလေ့ကျင့်သင်ကြားကြသည်ဟူ။ ၎င်း, သို့သော်အခန်းတစ်ခန်း၌သူတို့ကိုသော့ခတ်ကြဘူး။ နံရံများနှင့်ခြံစည်းရိုးများကိုအောက်သို့ (သို့) ဖြတ်သန်းသွားစေသည်။
Siberian Husky ကဲ့သို့ပင်အပြင်ဘက်ခွေးတစ်ကောင်အတွက်ခြံစည်းရိုးခြံဝင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ခြံစည်းရိုးက ၆ ပေရှည်တယ်။ တူးဖော်ခြင်းကိုတားစီးရန်မြေ၌ဝါယာကြိုးရှိသင့်သည်။
Klee Kai သည်တွင်းတူးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်ခြံတစ်ခုလုံးကိုမဖျက်ဆီးဘဲဤလုပ်ဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုမည့်haveရိယာတစ်ခုရှိသင့်သည်။ ခွေးများအားလုံးကဲ့သို့ပင်ခွေးများသည်ထွက်ပြေးခြင်းအလေ့အထရှိသည့်ခွေးတစ်ကောင်အတွက်desirableရိယာကိုနှစ်သက်ကြသည်။
ခွေးဂေဟာareaရိယာကိုကွန်ကရစ်ကွင်းတစ်ခုဖြင့်ချိတ်ထားသင့်သည်။ Klee Kai သည်တောင်တက်သမားများဖြစ်သောကြောင့်ခြံစည်းရိုးသည် ၆ ပေရှည်ရမည်။ သူတို့ကခွေးအိမ်တစ်လုံးလိုလိမ့်မယ်။
သူတို့သည်“ တောင်၏ဘုရင်” ဖြစ်လိုသောကြောင့်အမြဲတမ်းရနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုအမြဲရွေးချယ်ကြသည်။
ဤခွေးများကို Alaskan Husky နှင့် Siberian တို့မှမွေးထုတ်ခဲ့သော်လည်းအလွန်ကောင်းသောနာခံမှုရှိသောခွေးများကိုပြုလုပ်သည်။ သူတို့ဟာအရမ်းကိုစမတ်ကျပေမယ့်သူတို့ပိုင်ရှင်တွေကိုနှစ်သက်စေချင်တယ်။
ဒီပေါင်းစပ်မှုကခွေးတစ်ကောင်ကိုဘာအကြောင်းမှမတတ်အောင်လေ့လာနိုင်တယ်။ နာခံမှုကိုစောစီးစွာစတင်သင့်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုထူထောင်နှင့်သူတို့ကိုကပ်။ မင်း Klee Kai ကိုမင်းကသူဌေးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်။
သင့်ခွေးကိုသူ / သူမအားအရွယ်ရောက်သူအဖြစ်မလိုချင်သောခွေးတစ်ကောင်အဖြစ်တစ်ခုခုကိုခွင့်မပြုပါနှင့်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ချိန်ကပင်အလျှော့ပေးလိုက်လျောလျှင်၊ စည်းကမ်းများကိုဖောက်ဖျက်ရန်လုပ်သည်ဟုသင်သတ်မှတ်ထားပြီ
သင်သည်သင်၏ခွေးတစ်ကောင်အားအမူအကျင့်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်ကြားပြီးသည်နှင့်သူမအမြဲတမ်း၎င်းကိုလုပ်ရန်မျှော်လင့်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူ / သူမအားသင်မလုပ်စေလိုသောအရာများကိုမလုပ်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့် ကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးကိုဖျက်သိမ်းရန်။
Klee Kai သည်ထုပ်ပိုးမှုကိုအဓိကထားသည်။ ထို့ကြောင့်, သင်သည် pack ကိုခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထူထောင်ရပေမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ရည်ညွှန်းသော alpha roll ကိုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ခွေးကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းမဟုတ်ဘဲလေးစားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးရုံသာဖြစ်သည်။
ထိုနည်းဗျူဟာသည်နာကြည်းပြီးမခန့်မှန်းနိုင်လောက်အောင်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင့်ခွေးကိုလေးစားစွာဆက်ဆံပြီးထပ်တူမျှော်လင့်ပါ။ သင့်ခွေးကလေးကိုသင်မှန်မှန်ကန်ကန်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်သူ / သူမကဘယ်နေရာကိုမဆိုလိုက်သွားပါလိမ့်မယ်။
သင်တန်းကာလသည်နှောင်ဖွဲ့မှုအတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်သည်။ သင်၏ Klee Kai သည်အရာရာတိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိုသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ထားသောခွေးတစ်ကောင်အားလှည့်စားခြင်းသည်ကောင်းသောအကျင့်များကိုမွေးထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်သောအပြုအမူသည်အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှခွေးသည်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဤခွေးများအတွက်သွက်လက်သောအရာသည်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာအခြားခွေး A-frame တွင်သို့မဟုတ်တံတားပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်လူ့ ဦး တည်ချက်မရှိဘဲလိုက်နာလိမ့်မည်။ ဤသည်ပျော်စရာနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလေ့ကျင့်ရေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်နှင့်ခွေးနှစ် ဦး စလုံးစည်းကမ်းချက်များကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်ပျော်စရာရှိသည်။
သင်၏ခွေးကိုစိန်ခေါ်ခြင်းသည်သူ / သူမပျင်းရိခြင်းနှင့်ပြtroubleနာများဖြစ်ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
သင်လုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးကတော့ဒီအဖိုးတန်ခွေးငယ်များကိုလုယူဖျက်ဆီးခြင်းပဲ လူအများစုကဒီခွေးတစ်ကောင်ကိုယူပြီးသူတို့ကို“ ကလေး” လိုဆက်ဆံသည်။ သင်၏ကလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခွေးတွေကသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္understandကိုနားမလည်ကြဘူး။
၎င်း၏ခွေးသာတစ် ဦး ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။ ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုထားလိုက်ရင်သင့်ခွေးဟာတမင်တကာ၊ ရန်လိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ဤခွေးများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များနှင့်ကင်းလွတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးလေးသောမျိုးဆက်များကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိသောခွေးများကိုသာ ၀ ယ်ခွင့်ပြုသည်။ ခွေးပေါက်စများအားလုံးကို spay / netuter ကန်ထရိုက်များ၊ တွဲဖက်ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ်လေးနက်သောမျိုးဆက်များအတွက်ရောင်းချသည်။
ဒါကအပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့မှုရဲ့အကြောင်းအရင်းပဲလို့ငါယုံကြည်တယ်။ ကျနော်တို့ကရံဖန်ရံခါ undershot မေးရိုး, cryptorchidism ခဲ့ကြပြီးအတိတ်ကာလ၌ထွက်မလာဘဲ, အံသွားဆွဲခဲ့ကြရသောခွေးများရှိခဲ့သည်။ သူတို့ခွေးသေဆုံးသင့်သည့်အချိန်တွင်နေထိုင်သောခွေးများရှိခဲ့သည်။ သူတို့ဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံရှက်တတ်ခြင်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် - မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည်ဖော်ရွေပြီးဖော်ရွေသင့်ပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းလက္ခဏာများမပြသသင့်ပါ။
patella ကိုဂရုစိုက်ရမည်။ ၎င်းသည်ခွေးငယ်လေးများ၌သက်သောင့်သက်သာရှိသည့် patellas များကိုတီထွင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးမြူရေးခြံရှိဖြစ်နိုင်သည့်စိတ်သဘောထားများကိုအပိုဂရုပြုရမည်။ သင်စဉ်းစားရန်စဉ်းစားနေသောမည်သည့်ခွေးမဆိုသူ၏မိဘများသည်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်တစ် ဦး အားဇိမ်ကျသော patellas စစ်ဆေးရန်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
သို့သော်မျိုးဆက်အများစုသည်အလွန်သတိထားကြပြီး Klee Kai သည်ဆေးကုသမှုခံယူရာတွင်အခမဲ့ပြproblemနာဖြစ်နေသည်။
အဆိုပါမျိုးဆက်စတင်ခါစတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်ဘေးရီးယားနှင့်အလက်စကာဟက်စကီ၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန် Schipperke နှင့်အမေရိကန် Husky တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
မျက်လုံးပြာနဲ့ Klee Kai ရနိုင်မလား?
ဟုတ်ပါတယ်, Klee Kai မှာမျက်လုံးတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံးရှိနိုင်တယ်။ သူတို့မှာမျက်လုံးတစ်ဝိုက်နဲ့တစ်ခြားအညိုရောင်မျက်လုံးလည်းရှိနိုင်တယ်။ ဆိုက်ဘေးရီးယားတွင်၎င်းကို“ ပိုတိုမျက်စိ”၊ “ parti မျက်စိ” သို့မဟုတ်“ split မျက်စိ” ဟုခေါ်သည်။
မျက်လုံးမှာဘာမှမမှားပါ - ခွေးဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ် ဤသည်ဆိုက်ဘေးရီးယား Husky နှင့် Klee Kai တို့တွင်တွေ့ရသည်။
ခွေးကောင်မလေးအများစုသည်မပျော်မရွှင်ဖြစ်တတ်ကြသည်။ Klee Kai ၏သဘောထားသည်မည်သို့ရှိသနည်း။
Klee Kai မှာခွေးကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ ရံဖန်ရံခါကျွန်ုပ်ခေါ်သောအခါအော်ဟစ်ငေါက်ငမ်းခြင်းသို့မဟုတ်တွန်းလှည်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိကြသည်။ ဤအသံသည်နှိုးစက်တစ်ခုအတွက်သိမ်းဆည်းထားသည်။ Klee Kai သည်အလွန်အလုပ်များသောခွေးများဖြစ်သည်။ သူတို့က impish နှင့်ဖန်တီးမှုဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုခြေချောင်းတွေပေါ်မှာထားမှာဖြစ်တယ်။ ခွေးတစ်ကောင်သည်ဆေးကြောထားသောလျှို့ဝှက်ထားသောနေရာတွင်ပန်းကန်ဆေးစက်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့သည်ဟုသတင်းရရှိသည်။ သူတို့ကအသက် ၂ နှစ်သာရှိသေးတယ်။
Klee Kai ဘယ်လိုအေးတာလဲ။
အလပ်စကာတွင်ဖောက်ခွဲခြင်းကိုတီထွင်ခဲ့သောကြောင့်အလွန်အမင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအအေးမိခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မိုthe်းပွင့်၌သူတို့မြေပြင်ပေါ်မှာဘယ် paw alternate ပါလိမ့်မယ်, ထို့ကြောင့်နှင်းခဲအဘို့အခွင့်အလမ်းတွေကို minimize ။
သငျသညျ Klee Kai ကို double coated ကြောင်းသတိပြုပါလိမ့်မယ်။ မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူရောင် Klee Kai တွင်အဖြူရောင်အင်္ကျီရှိသည်။ အနက်နှင့်အဖြူရောင် Klee Kai တွင်အဖြူရောင်အင်္ကျီတစ်ထည်ရှိသည်။ ၀ ံပုလွေမီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူရောင် Klee Kai တို့သည်မီးခိုးရောင် undercoat ရှိသည်။
အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင် Klee Kai တွင်အဖြူရောင်အင်္ကျီတစ်ထည်ရှိသည်။ undercoat သည်အအေးနှင့်အပူမှကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ရှည်လျားသောအစောင့်ဆံများသည် Klee Kai အားအစိုဓာတ်မှကာကွယ်ပေးသည်။ Klee Kai သည်တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်၊ ၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်အတွင်း၎င်း၏ undercoat ကိုသွန်းလောင်းမည်။
ငါမက္ကဆီကိုမှာနေတယ်၊ ​​ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့ Klee Kai ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။
Klee Kai သည်အခြားခွေးများကဲ့သို့ပင်နွေရာသီတွင်ရေနှင့်အရိပ်များစွာလိုအပ်သည်။ ကလေးတစ် ဦး ၏ရေကူးကန်သည်ခွေးအအေးမိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ နွေရာသီတွင်ခွေးတစ်ကောင်ကိုကားတစ်စီး၊ သေတ္တာတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားသိုလှောင်ခန်းများတွင်ထားရှိခြင်းသည်အပူပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေနိုင်သည်။
လေထုလည်ပတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ခွေးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်အပူအရမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ပင်တစ်နေ့တာအပူရှိန်တွင်အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အားပေးခြင်းဖြင့်ခွေးကိုအပူမပေးပါ။
Klee Kai သည်ရေခဲမုန့်စားလိုသည်၊ အထူးသဖြင့်နွေရာသီတွင်၎င်းကိုနှစ်သက်သည်။ Klee Kai သည်၎င်း၏အင်္ကျီကိုနွေရာသီမတိုင်မီတွင်သွန်းလောင်းပြီးမရိတ်သင့်ပါ။ ၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ၊
Klee Kai သည်ကလေးများအားချစ်မြတ်နိုးပြီးခွေးကိုမရိုမသေပြုရန်ကလေးကိုသင်ကြားပေး သ၍ ကလေးများအားချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်။ ဤခွေးများသည်သေးငယ်သောအရာဖြစ်ပြီးထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကလေးသည်ကြီးလေးသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Klee Kai အများစုသည်ကလေးအားခွေးမပြေးမီကလေးသည်ကြီးလေးသောပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည့်အလုံအလောက်ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ပိုင်ရှင်များသည်ကောင်းသောခွေးများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ကလေးတစ် ဦး ၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤဆဌမသဘောသဘာဝရှိပုံရသည်။ များသောအားဖြင့်မကောင်းသောအကြံအစည်ရှိသောကလေးငယ်ကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်။
ခြံတစ် Klee Kai များအတွက်လုံလောက်သောကြီးတွေလား?
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကလေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့၊ ကောင်းတဲ့ခြံဝင်းထဲမှာသူတို့ပြီးအောင်လုပ်မှာပါ။ အကယ်၍ ခွေးတစ်ကောင်ထက်ပိုပါက၎င်းတို့သည်လိုက်ဖမ်းကြလိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါကသူတို့သည်ငှက်များ၊ ငှက်များမှအရိပ်များ၊ ကျိုင်းကောင်များ၊ မြွေများသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကိုလိုက်ဖမ်းသင့်သည်။
အကယ်၍ ပိုင်ရှင်သည်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးသုံးကြိမ်ခွေးလမ်းလျှောက်ရန်သေချာပါက၎င်းတို့ကိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်တိုက်ခန်းအရွယ်ရှိဖဆပလများဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ တစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်ပဲသွန်းလောင်းတယ်။ အချိန်တိုင်းသူတို့ကုတ်အင်္ကျီကိုမှုတ်။ ဤကာလအတွင်းသန့်စင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်တစ် ဦး သည် ၁၀ ပေါင်မှ ၂၀ ပေါင်ရှိသောခွေးတစ်ကောင်ကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုနေသည့်ဆံပင်များကဲ့သို့ပုံမှန်အတိုင်းရှိတတ်သည်မဟုတ်ပါ။
အားလုံးမဟုတ်ပါ။ Klee Kai သည်အခြားခွေးများကိုရန်သူများအဖြစ်မဟုတ်ဘဲခွေးငယ်များအနေဖြင့်သာလူသိများသည်မဟုတ်ပါ။ ဤခွေးများသည်ခွေးကြီးတစ်ကောင်၏ပတ်ပတ်လည်တွင်ကြီးပြင်းလာပါကအဟောင်းခွေးများ၏လက္ခဏာများကိုကောက်ယူလေ့ရှိသည်။
ပျှမ်းမျှ Klee Kai သည် ၁၀ ပေါင်မှ ၂၀ ပေါင်အထိရှိပြီး ၁၂ လက်မမှ ၁၅ လက်မအထိရှိသည်။
ဘယ်သူက Klee Kai ပိုင်ဆိုင်မလဲ။
သူတို့ခွေးတွေလိုခွေးတွေကိုဆက်ဆံချင်တဲ့သူကဒုက္ခပေးမှာပါ။ ဆံပင်မခံနိုင်သူမည်သူမဆို Klee Kai မဖြစ်သင့်သည်။ doggy အနမ်းမခံရပ်နိုင်သူမည်သူမဆိုတစ် ဦး Klee Kai ချင်ပါဘူး။
တသမတ်တည်းမဖြစ်နိုင်သူမည်သူမဆိုတစ် ဦး Klee Kai မပိုင်ဆိုင်သင့်ပါတယ်။ Klee Kai ကိုမြင်တဲ့သူတိုင်းကသူတို့ဘာလဲ၊ သူတို့ဘယ်မှာရနိုင်မယ်၊ ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Klee Kai ကိုမြင်သူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ထားနဲ။
ဒီမျိုးနွယ်ကို AKC ကအသိအမှတ်ပြုပါသလား။
AKC အသိအမှတ်ပြုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့လျှောက်ထားပြီးယခုအချိန်တွင်တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ခွေးများကိုပြသလိုသူ Klee Kai ကိုမွေးဖွားလိုသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးများကိုပြသနိုင်ခြင်း၊
မျိုးပွားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်လိုသော်လည်း AKC နှင့် FIC အပြင်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုခွေးများကိုပြသရန်အခြားတိုင်းပြည်များမှလူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေများကိုပေးနိုင်ရန်အမေရိကန် Kennel Club နှင့်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
Klee Kai အမျိုးသားဥယျာဉ်ကလပ်သည်မွေးမြူရေးအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောခွေးများအဖြစ်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက်လက်ရှိခွေးများအားလုံးကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
Klee Kai National Kennel Club ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီကျင့်သုံးခဲ့သည့်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ကလပ်သည် Klee Kai Picnic ၌တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်တရားဝင်တွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးနှင့်ပျော်ပွဲစားပေါင်းစပ်ခဲ့ကြသည်။ ယူအက်စ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်အဖွဲ့ ၀ င်များစွာရှိသည်။ အနာဂတ်မှာတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာအမျိုးသားရေးအစည်းအဝေးတွေလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။
ဤအချိန်တွင် Klee Kai နှင့်ပတ်သက်သောဖြန့်ဝေသောစာပေများမရှိသောကြောင့်ထိုအမျိုးအနွယ်သည်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေသည်။ သင်ရနိုင်သမျှအနီးဆုံးမှာဆိုက်ဘေးရီးယား Husky စာအုပ်ရဖို့ဖြစ်သည်။ အချို့သောအရာများသည်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်းသင်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်အကြောင်းအရာအများစုသည် Klee Kai နှင့်အတူမှန်ကန်လိမ့်မည်။
Klee Kai ဟာအိမ်ကောင်းတစ်ခုကနေမပြေးပါဘူး။
အဆိုပါဖောက်စံ, ထိုဖောက်၏ပြီးပြည့်စုံသောနမူနာအဘို့, သင်အလိုတော်လျှင်။ ဤစံသည်မျိုးပွားခွေးများအားလုံးကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသောယာဉ်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောမျိုးပွားသူတိုင်းသည်တတ်နိုင်သမျှပြီးပြည့်စုံရန်နီးစပ်ရန်ကြိုးစားသည်။
မူလရည်ရွယ်ချက် - Klee Kai ကို Linda Spurlin ကအဖော်အဖြစ်ခွေးမွေးစားခဲ့သည်။
မျိုးဆက်သမိုင်း: ဤခွေးများကို Siberian နှင့် Alaskan Huskies မှမွေးမြူခဲ့သည်။
အစောဆုံးသမိုင်း 1970 အလယ်ပိုင်း
မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အထူးသဖြင့် Wasilla, Alaska ။
Klee Kai သည်အိမ်မွေးခွေးငယ်လေးဖြစ်ပြီးသူ့ခြေထောက်ပေါ်လျင်မြန်ပြီးအလင်းရောင်ရှိပြီးလှပသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ သူ၏အလယ်အလတ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ ကျန်းမာသောကိုယ်ခန္ဓာ၊ နားစိုက်ထူခြင်းနှင့်မြေခွေးနှင့်တူသောအမြီးသည်ဆိုက်ဘေးရီးယားရှိ Husky ကဲ့သို့သူ၏မြောက်ပိုင်းအမွေအနှစ်ကိုဖော်ပြသည်။
သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနှင့်ပုံသဏ္hisာန်သည်သူ၏အခြေခံမျှတသောစွမ်းအား၊ အမြန်နှုန်းနှင့်ခံနိုင်ရည်တို့ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ဆွဲထုတ်ခြင်းသည်အားကောင်းသောဗီဇတစ်ခုဖြစ်ပြီးခွေးငယ်လေးမှပင်အချိုးကျလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
သင့်တော်သောအခြေအနေတွင် Klee Kai သည်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးခိုင်မာသောကြွက်သားများရှိပြီးကိုယ်အလေးချိန်မပိုသည်။
မျက်နှာမျက်နှာဖုံးသည်ဒီဖောက်ခြင်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်ပြီးခြားနားသောအရောင်များကြောင့်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။ မတူညီသောမျက်နှာဖုံးအမှတ်အသားများ၏ပေါင်းစပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးအောက်၊ နှာခေါင်းအောက်ဘက်နှင့်မျက်နှာကိုဘောင်ပေါ်တွင်ခြားနားသောအရောင်ရှိသည့်မျက်နှာဖုံးအပြည့်ပါ။
လေးပုံသုံးပုံမျက်နှာဖုံးသည်တူညီသော်လည်းမျက်လုံးအောက်၌အရောင်မရှိကြပါ။ မျက်နှာတစ်ဝက်တွင်မျက်နှာဖုံးနှင့်မျက်လုံးအောက်၌အရောင်ကင်းမဲ့နေသည်။ အနည်းဆုံးနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သောမုဆိုးမတစ် ဦး ၏ထိပ်သည် ဦး ခေါင်း၌သာခြားနားပြီးမျက်နှာကိုသာပုံဖော်ထားသည်။
ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောမျက်နှာareaရိယာသည်မေးရိုးအရိုးများကိုဖုံးအုပ်ရန်နှင့်မေးစေ့အောက်ရှိcoverရိယာကိုဖုံးအုပ်ရန်နောက်ကျောကိုတိုးရမည်။ ၎င်းသည်မဖြစ်မနေမဟုတ်သော်လည်းမျက်လုံးအထက်တွင်အစက်အပြောက်များထားရှိလိုသည်။ နှာခေါင်းအလယ်ဗဟိုမှောင်မိုက်သောချည်ထားရန်လည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
အရည်အချင်းမပြည့်မှီသော: နှာခေါင်းတစ်ခုလုံးနှာခေါင်းတစ်လျှောက်လုံးတူညီသောအရောင် (သို့) နှုတ်ခမ်းများအပေါ်တွင်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောအရောင်များရှိခြင်း (fox mask ၌ရှိသကဲ့သို့) ။ မျက်လုံးအောက်ရှိအရောင်သည်ထက်ဝက်ကျော်ကိုနှာခေါင်း၏အဆုံးအထိတိုးချဲ့သည် (မြေခွေးမျက်နှာဖုံးကဲ့သို့) ။
မျက်လုံးအောက်ရှိအရောင်သည်နှာခေါင်း၏အဆုံးထက်ဝက်ကျော်ကိုတိုးချဲ့သည် (မရှိသောသို့မဟုတ်မျှတမှုမရှိသောမျက်နှာဖုံးကဲ့သို့) ။
အလေးနှင့်အလေးချိန် : အမြင့်မှညှိုးနွမ်းမှမြေသို့တိုင်းတာသည်။ Klee Kai သည်အရွယ်အစားအချိုးအစားရှိသင့်ပြီးလေးလံလွန်းခြင်းလည်းမဖြစ်သင့်ပါ။
ကစားစရာ - ၁၃ လက်မအထိနှင့်။
သေးသေးလေး - ၁၃ လက်မနှင့်အထက် ၁၅ လက်မအပါအ ၀ င်။
စံ - ၁၅ လက်မအထက် ၁၇ လက်မနှင့်အထက်။
အရွယ်အစား - ၁၇ လက်မနှင့် ၁၈ လက်မအပါအ ၀ င်။
အကယ်၍ ဤအရွယ်အစားကြီးသောအမျိုးအစားသည်ခွေးများကိုပုံမှန်ခွင့်ပြုသည်ထက်ပိုမိုများပြားသည်ဆိုပါကသူ / သူမသည်၎င်း၏မွေးမြူရေးအဆင့်ကိုဆုံးရှုံးသင့်သည်။ အကယ်၍ ပိုင်ရှင်ကဤတိရိစ္ဆာန်အတွက်ခွေးပေါက်စများအပေါ်တားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ပါကသူ / သူမသည်၎င်း၏ပြသမှုအခြေအနေကိုလည်းဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
အရည်အချင်းမပြည့်မှီသော : ညှို့မှာ 18 လက်မကျော်ခွေးနှင့်ခွေး။
မျက်လုံး - ဗာဒံပုံသို့မဟုတ်ဘဲဥပုံအလယ်အလတ်မှအလယ်အလတ်အကွာအဝေးသို့ဘဲဥပုံ။ ဒီအသုံးအနှုန်းကစိတ် ၀ င်စားတယ်၊ ဖော်ရွေတယ်၊ ​​စိတ်ဝင်စားတယ်၊
မျက်လုံးအရောင် - အညိုရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ တစ်ခုစီသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရောင်များကိုလက်ခံနိုင်သည်။
ပြနာများ - မျက်စိများလွန်း Oblique သတ်မှတ်ထား; အတူတကွနီးကပ်လွန်းထား, ဒါကြောင့်ဖောင်းပွပုံပေါ်သကဲ့သို့ပတ်ပတ်လည်။
ဦး ခေါင်းခွံ - အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအရထိပ်တွင်အနည်းငယ်တည့်တည့် ရှိ၍ မျက်လုံးအထိအရှိန်လျော့သွားသည်။ ၎င်းသည် ဦး ခေါင်း၏ ၅ မှရှစ်ဆမှတစ်ဝက်အထိကိုရပ်တန့်ခြင်းမှ occiput ကိုတိုင်းတာသင့်သည်။
မှတ်တိုင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ရမည်။ နှုတ်ခမ်းများသည်ကတ်ကြေးကိုက်။ တင်းကျပ်စွာကိုက်ညီသင့်သည်။
ပြနာများ - ဦး ခေါင်းညံ့ဖျင်းသောသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထောင်ပြီးမှာအရိပ်အမြွက်အဘို့အလေးလံလွန်း။ အဓိကအမှားတစ်ခုကနှင်းနှာခေါင်း (ပန်းရောင်လိပ်ပြာ) ။ တစ်ဖြောင့်ကိုက်သို့မဟုတ်ဖြတ်ပြီးကတ်ကြေးကိုက်တဲ့အမှားဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အချင်းမပြည့်မှီသော: အနီရောင်ဖြင့်ဖုံးထားသည့်ခွေး၏အမှု၌အနက်ရောင်သို့မဟုတ်ချောကလက် မှလွဲ၍ မည်သည့်ပြည့်စုံသောအရောင်မဆိုနှာခေါင်း။
နှုနျး - အလျားအလျားဆိုလျှင်နှာခေါင်းထိပ်မှအစမှတ်အထိအကွာအဝေးသည် ဦး ခေါင်း၏အ-္ဌမအthree္ဌမနေရာ၌ရှိသည့်အလားမှတ်တိုင်မှအလားအတုံးသို့အကွာအဝေးနှင့်အနည်းငယ်တူသည်။ အဆိုပါမှတ်တိုင်ကိုကောင်းစွာသတ်မှတ်ပေမယ့်အသံထွက်မနှင့် ဦး ခေါင်းခွံသို့လျှောသင့်ပါတယ်။
တံတားသည်အစမှအဆုံးအထိဖြစ်သည်။ နှာခေါင်းသည်အလယ်အလတ်အကျယ်ရှိပြီးတဖြည်းဖြည်းနှာခေါင်းသို့တည့်တည့်ရွေ့သွားသည်။ နှုတ်ခမ်းများသည်အရောင်ခြယ်ထားသည့်အပြင်အနီးကပ်လျောက်ပတ်သည်။
ပြနာများ - ကျယ်လွန်းလွန်းသည်၊ တိုလွန်းသည်သို့မဟုတ်ရှည်လွန်းခြင်း၊ ကတ်ကြေးထက်အခြားကိုက်။
အရည်အချင်းမပြည့်မှီသော: - Overshot or undershot မေးရိုး။
နှာခေါင်း - အနီရောင်ခွေးများတွင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်ချောကလက်။
နား - အလတ်စားမှအနည်းငယ်ကြီးမားသောအရွယ်အစားရှိသော်လည်းအချိုးအစားအရတြိဂံပုံသဏ္inာန်၊ အနီးကပ်လျောက်ပတ်။ ခေါင်းပေါ်တွင်မြင့်တင်ခြင်း။ ၎င်းတို့သည်အထူများ၊ ကောင်းမွန်သောအနာများ၊ နောက်ဖက်တွင်အနည်းငယ် arched၊ ခိုင်မြဲစွာစိုက်ထူထားသည်။
ပြနာများ - နားသည် ဦး ခေါင်းနှင့်အချိုးအစားအရကြီးမားလွန်းသည်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိုက်ထူခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်အရောင်ခြားနားသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်အပေါ်ဆနျ့ကငျြအရောင်ထက်အခြားမဟုတ်။
အရောင် - အနက်ရောင်မှအပေါ့ပါးဆုံးမီးခိုးရောင်အထိအရောင်များ၊ ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီမျိုးစုံရှိအရောင်အမျိုးမျိုးရှိပြီးအဖြူအားလုံးသည်ခွေး albino မဟုတ်သရွေ့လက်ခံနိုင်သည်။ ခွေးဖြူအားလုံးသည်အဖြူရောင်ပေါ်တွင်မုန့်များဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအခြားအဖြူရောင်ခွေးများနှင့်လည်းမျိုးပွားခွင့်မပြုပါ။
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏အမှတ်အသားများသည်မျှတမှုရှိပြီးမျက်စိကိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပုံရသည်။ အမျိုးမျိုးသောအမှတ်အသားများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သို့သော်တစ်ဖက်စီသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ထင်ဟပ်သင့်သည်။ ခွေးအနီရောင်ကလွဲရင်၊ နှုတ်ခမ်းကအနက်ရောင်ဖြစ်သင့်တယ်။
အရည်အချင်းမပြည့်မှီသော: အဖြူရောင်အငူ။ အချိုးကျမဟုတ်သောကုတ်အင်္ကျီပေါ်မဆိုအမှတ်အသားများ။ မည်သည့်အစိုင်အခဲအရောင်မှမဆိုမျက်နှာဖုံးမရှိခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ခြေထောက်များနှင့်တိရစ်ာဆန်ခြင်းမရှိသောအဖြူခွေး မှလွဲ၍ အဖြူရောင်ပေါ်တွင်မုန့်ဖြစ်သည့် albino မဟုတ်သောမည်သည့်အရောင်မှမရသည့်ခွေး
အင်္ကျီပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကွဲပြားခြားနားသောနေရာများ (မျက်စိများမှလွဲ။ နဖူးသို့မဟုတ်နှာခေါင်းအလယ်တွင်မီးတောက်နှင့်အမြီး၏အဆုံးတွင်အဖြူရောင်အစွန်အဖျား) ။
Klee Kai ၏ကုတ်အင်္ကျီသည်နှစ်ဆရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အလတ်စားဖြစ်ပြီးရှည်လျားသောဆံပင် Klee Kai သည်လုံးဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်ကောင်းပြီးအရောင်တောက်ပသောအသွင်အပြင်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်းခွေး၏သန့်ရှင်းသောအောက်လိုင်းကိုဖုံးကွယ်ရန်ဘယ်တော့မျှမကြာပါ။
အတွင်းခံအင်္ကျီသည်နူးညံ့။ သိပ်သည်းသည်။ အပြင်ပိုင်းကုတ်အင်္ကျီကိုထောက်ပံ့ရန်လုံလောက်သောအရှည်ရှိသည်။ အပြင်ကုတ်အင်္ကျီ၏အစောင့်ဆံများသည်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းပြီးချောမွေ့စွာပျံသန်းသည်၊ ရာသီအလိုက်သွန်းလောင်းစဉ်အတွင်း undercoat မရှိခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။
ပြနာများ - အပေါ်ယံခွင့်ပြုချက်အရအထက်ပါခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲခွေး၏ပုံသဏ္obာန်ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းနှင့်အင်္ကျီကိုချုံ့ခြင်းစသည်တို့သည်အလွန်ရှည်လျားသောကြမ်းတမ်းသောသို့မဟုတ် shaggy ကုတ်အင်္ကျီ။
အပူချိန် - ဝိသေသလက္ခဏာသည်စိတ်ထားဖော်ရွေမှုရှိသော်လည်းနယ်မြေနှင့်မိသားစုကိုအကာအကွယ်ပေးသည်၊ သို့သော်တစ်ချိန်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်မှာနိုးနိုးကြားကြားရှိပြီးအပြင်ထွက်သွားသည်၊ သူတစ်ပါးနှင့်မရောနှောပါ၊
လည်ပင်း - အလတ်စားအလျား - ခန္ဓာကိုယ်အရှည်သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သည်ခွေးရပ်နေသည့်အခါခန္ဒကိုယ်ခန္တာကိုယ်ကိုမြှောက် ထား၍ သယ်ဆောင်ထားသည်။ Trot တစ်ခုတွင်ရွေ့လျားသောအခါ ဦး ခေါင်းကိုအနည်းငယ်ရှေ့သို့သယ်ဆောင်ရန်လည်ပင်းကိုတိုးချဲ့သည်။
ပြနာများ - လည်ပင်းတိုလွန်းပြီးအထူ; လည်ပင်းရှည်လွန်း
ပခုံးများ - ပခုံးဓါးကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၄၅ ဒီဂရီထောင့်ရှိမြေပြင်သို့ပြန်တင်ထားသည်။ အထက် arc arc ထောင့်အနည်းငယ်နောက်ပြန်ပခုံးပွိုင့်မှတံတောင်ဆစ်မှမြေပြင် perpendicular ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
ပြနာများ - ဖြောင့်သောပခုံးများ၊ ပခုံးအချောင်။
ပြနာများ - ရင်ဘတ်များလွန်းကျယ်ပြန့်, 'စည်နံရိုး' နံရိုးလည်းပြားချပ်ချပ်သို့မဟုတ်အားနည်းနေ။
နောက်သို့ - နောက်ကျောကညှိုးနွမ်းသွားတဲ့အထိ croup အထိ level topline ရှိတယ်။ ကိုယ်ထည်မှတင်ပါးသို့သွားသောကိုယ်ထည်အရှည်သည်မြေပြင်ပေါ်ရှိညှိုးနွမ်းနေသောလက်မ (သို့) ၂ ခုထက်ပိုသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိရှည်လျားလွန်းခြင်းကြောင့် cobby မဟုတ်သလိုနှေးကွေးနိုင်သည်။
ခါးသည်တင်းကြပ်။ ပိန်သည်နံရိုးလှောင်အိမ်ထက်အနည်းငယ်ကျဉ်းသည်။ အဆိုပါ croup ကျောရိုးမှထောင့်မှာကျဆင်းသွားပေမယ့်နောက်ကျောခြေထောက်များ၏နောက်ပြန်တွန်းကန်အားကန့်သတ်ရန်သကဲ့သို့ဤမျှပြင်းထန်စွာဘယ်တော့မှမ။ ပရိုဖိုင်း၌, သူကတစ် ဦး နီးပါးစတုရန်းပုံပန်းသဏ္ဌာန်ပေးအလတ်စားအရှည်သည်။
ပြနာများ - အားနည်းသို့မဟုတ်ပြန်လျှော့; ပြန်ရောက်သွားတယ် sloping topline ။
ရှေ့ပိုင်း ရှေ့မှရပ်။ ကြည့်နေစဉ်ခြေထောက်များသည်ခန္တာကိုယ်နှင့်နီးစပ်သောတံတောင်ဆစ်များဖြင့်အလယ်အလတ်တန်းတူရှိပြီးတည့်တည့်မှည့်နေသည်။ ဘေးထွက်မှကြည့်ရှု, pastern pastern ပူးတွဲခိုင်မာပေမယ့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူအနည်းငယ် slanted နေကြသည်။
ပြနာများ - အားနည်းနေ pasterns, လေးလံသောအရိုး; အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသို့မဟုတ်ရှေ့တွင်ကျယ်လွန်း; တံတောင်ဆစ်အထဲသို့ဝင်သို့မဟုတ်ထွက်လှည့်။ Siberian Husky ၏အမွေအနှစ်များကိုငြင်းဆန်နိုင်ရန်အတွက်အလွန်သေးငယ်သောအရောင်နှင့်အရသာရှိသောအရိုးများ။ ခြေတံရှည်များနှင့်တူရန်ခြေထောက်တွင်အလွန်အကျွံရှည်လျား
Hindquarters - နောက်ဘက်မှရပ်။ ကြည့်ရှုသောအခါ, ခြေထောက်အတန်အသင့်အကွာအဝေးနှင့်အပြိုင်ဖြစ်ကြသည်။ အထက်ပေါင်များသည်ကြွက်သားများရှိပြီးကောင်းစွာကွေးနိုင်သည်။ အပေါက်ချိတ်ကိုကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ပြီးမြေနိမ့်သည်။ Dewclaws (ရှိပါက) ဖယ်ရှားပစ်သင့်ပါတယ်။
Klee Kai သည်အာတိတ်ဒေသရှိမျိုးဆက်များမှဆင်းသက်လာသောကြောင့်အနောက်ဘက်ရှိဌာနချုပ်၏ခြုံငုံပုံသည်ပါဝါအချို့ကိုပြသသင့်သည်။
ပြနာများ - နောက်ဘက်တွင်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းသည်
အဓိကချို့ယွင်းချက်များ ဖြောင့် stifles နှင့်နွားမ hocks ။
ပေ - ပုံသဏ္inာန်ဘဲဥပုံ, ဒါပေမယ့်မရှည်။ အဆိုပါယက်အရွယ်အစားသေးငယ်ပေမယ့်ပျက်စီးလွယ်ကြည့်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ခြေချောင်းများနှင့် pad ပါ s ကိုအကြားကောင်းမွန်စွာ furred ။ အဆိုပါ pads ခက်ခဲတဲ့နှင့်ထူထပ်ကူသည်။ ခွေးသည်သဘာဝအနေအထားတွင်ရှိသည့်အခါလက်သည်းများမဝင်၊
ပြနာများ - နူးညံ့သောသို့မဟုတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောခြေချောင်းများ၊ နှာခေါင်းကြီးများနှင့်ညံ့ဖျင်းသော၊
အမြီး - အမြီးသည်အတန်အသင့်ရှည်ရမည်။ အမြီးအရိုးမှာနှိမ့်လိုက်သည့်အခါ hock ထက်အနည်းငယ်ပိုရှည်မည်ဖြစ်သော်လည်းအနည်းဆုံးတော့နောက်ကျောကိုကောက်ကာနောက်ကျောထိသည်။ ဆံပင်ရှည်ရှည်ကိုဖုံးအုပ်ထားသင့်သည်။
ပြနာများ - သာအလံသောအမြီး။
ဝှေးစေ့ - ခွေးအထီးရှိခဲ့ရမည်ဖြစ်ပြီးမတော်တဆပျက်စီးခြင်းမရှိလျှင်ခွေးတစ်ကောင်သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေရလျှင်ဆီးကြိတ်ထဲ၌ ၀ ဏ်ဆဲလ်နှစ်ခုလုံးကိုထိန်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို VET မှမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ပြနာများ - တစ် ဦး ကနှစ်ဆချိတ်သို့မဟုတ်နောက်ကျောအပေါ်ပြားချပ်ချပ်တင်သော။ တရားသူကြီးသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကျောနောက်ကျောကိုကြည့်ရှုသင့်သည်။
သွား - အဆိုပါ Klee Kai ရဲ့ဝိသေသသွား prancing သို့မဟုတ်သမင်သည်။ ခြေသည်းများနှင့်ခြေထောက်များကိုတံတောင်ဆစ်များ၊ ခွေးသွားနေစဉ် topline မြဲမြံခိုင်မာနေဆဲဖြစ်သည်။
ပြနာများ - သစ်သို့မဟုတ်လှိမ့လှိမ့်; ကူး, ဒါမှမဟုတ် crabbing ။
Klee Kai တွင်မွေးမြူထားသောအရွယ်အစားကြီးမားသည့်ကစားစရာများမှာကြီးမားသောအိမ်များနှင့်ရင်ပေါင်ခွေးများ၊ အရိုးသေးငယ်သောမျှတသောအချိုးအစားများ၊ လွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်မှု၊ လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်မှု၊ သင့်လျော်သောအင်္ကျီ၊ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော ဦး ခေါင်းနှင့်နားရွက်များ၊ ကစားချိန်များ၊ ကောက်ဆွများကဲ့သို့အမြီး၊
အလွန်အကျွံအရိုးသို့မဟုတ်အလေးချိန်၏ပုံသဏ္orာန်, ကျပ်သို့မဟုတ်ညံ့ဖျင်းသောသွား, ဒါမှမဟုတ်ရှည်လျားသော, ကြမ်းတမ်းသောအင်္ကျီကိုအပြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ နှစ် ဦး စလုံးလိင်နှစ်မျိုးလုံးတွင် Klee Kai သည် Sprint-Racing တိရိစ္ဆာန်ကိုအကြံပြုရန်အတွက်လျင်မြန်သော်လည်းမပေါ့ပါး။ ပျက်စီးလွယ်သောအသွင်အပြင်ကိုပေးသည်။
သူကမုဆိုးပါ၊ ငှက်များ၊ ရှဥ့်များ၊ ကြွက်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သူ၏အရွယ်အစား၊ အမြန်နှုန်းစသည်တို့ကဲ့သို့သောသူ၏အားနည်းချက်များကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်လုံလောက်သောစမတ်ကျသည်။
ဖော်ပြပြီးသောအမှားများအပြင် Klee Kai တွင်မျိုးဆက်အားလုံးတွင်တွေ့ရသောထင်ရှားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအမှားများသည်အခြားမည်သည့်မျိုးစိတ်များတွင်မဆိုဤကဲ့သို့သောဖော်ပြချက်မပါသော်လည်းမလိုလားအပ်ပေ။
ခလုတ်များ ခွေးပေါက်စများကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်အတန်းနှင့်နီးကပ်စွာဆုံးဖြတ်သည် ခွေးကလေးသည်အဖြူရောင်နှင့်အဖြူရောင်မဟုတ်လျှင် Klee Kai ခွေးပေါက်စများသည်အသက်ခြောက်လမပြည့်မှီအရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့၏အရောင်ကိုမရရှိနိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။
ကုတ်အင်္ကျီ၏သိပ်သည်းဆခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်နှစ်ခန့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်မတူပါ။ ရံဖန်ရံခါမျက်လုံးအောက်ရှိအရောင်သည်တစ်နှစ်နီးပါးခန့်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အရွယ်ရောက်အင်္ကျီကိုလာသောအခါခွေးပေါက်စရဲ့အမြီးသိသိသာသာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မျက်နှာဖုံး; သို့သော်အများကြီးအစောပိုင်းကအရပျ၌ဖြစ်သင့်သည်။ ခွေးပေါက်စများ၌အသက်ခြောက်လအရွယ်ရှိသည့်ဆီးကြိတ်ထဲ၌ ၀ တ်မှုန်နှစ်ခုလုံးရှိသင့်သည်။
ဂျာမန်သိုးထိန်း Border Collie ရောနှောခြင်း: တစ် Shollie ရန်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မိဘ၏လမ်းပြ
lab pit ရောနှောစိုက်ပျိုးမှုအပြည့်
alaskan klee kai ဘယ်လောက်လဲ
ဂျာမန်သိုးထိန်း pitbull ဓာတ်ခွဲခန်းရောနှော